အကို ရေမွန် မကျွတ်လွတ်သေးဘူးလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ညီမဖြစ်သူ လပြည့်ကဗျာ…… – Cele Oscar
August 11, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတျကွီးရေ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၂၃ ရကျနေ့ မှာဆိုရငျတော့အ ဆိုတျောရမှေနျက ထှကျပွေးတိမျးရှောငျရငျး ကနျြး မာရေး အခွအေနကွေောငျ့ရုတျတရကျ ကှယျလှ နျသှားခဲ့ရပါတယျ၊အဆိုတျောရမှေနျ ရဲ့မိသားစု မြားနဲ့သူ့ရဲ့ ပရိတျသတျကွီး မြားနဲ့အ တူထပျတူဝ မျးနညျး ရပါတယျ။ကှယျ လှနျသှားပွီဖွဈ တဲ့အဆိုတျောရမှေနျလဲကောငျးရာ သုဂတိလားပါေ စလို့ဆုတော ငျးပေးလို ကျပါတယျ။
အခုတဈခါမှာဆိုရငျလဲညီမဖွဈ သူလပွညျ့ကဗြာ က အဈကိုဖွဈသူအဆိုတျောေ ရမှနျမကြှတျလှတျသေးဘူးလို့ပွောတဲ့လူတှကေိုဒဲ့ပွောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော။လပွညျ့ကဗြာက”ဘပီကို သူလုပျစခေငျြတာလေးတှေ ၊ သူလိုအပျတာလေးတှေ လုပျပေးခငျြတာအခုတော့ မပွီးမပွတျနဲ့ ထားခဲ့ရပွီ 😔လုပျပေးမယျ၊ကူညီပေးမယျပွောပေးမယျဆိုလညျး ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ ကူညီပေးစခေငျြမိတယျအခုတော့ တဝကျတပွတျ ဟိုမရောကျ ဒီမရောကျနဲ့စာတောငျမပွနျရှာတော့ဘူး 😅ကိုယျတှကေ ဘပီ ကောငျးရာမှနျရာ ရောကျမယျလိျု့သိထားပီးသား ဒါပမေယျ့…. သူပဲ မကြှတျသေးဘူး၊ ရှိနသေေးတယျ၊လုပျပေးစရာတှအေမြားကွီးရှိတယျဆိုပွီး…မိသားစုတှေ(အထူးသဖွငျ့ မကွေီးပေါ့) ကိုသောကအပူတှေ ပေးပွီးမှတော့ ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ ကူညီစခေငျြမိတယျမလုပျပေးနိုငျဘူး မကူညီနိုငျဘူးဆိုလဲ အစထဲကစာတှရေေးရေးပီး တငျမနနေဲ့ပေါ့
ဒီကလူတှကေ မြှျောလငျ့တကွီး စောငျ့နကွေရတာလေ သှားမေးတော့လဲ စာတောငျဝငျ မဖတျကွညျ့ပေးမယျ ပွောပီး ကိုယျစတ့ဇာတျလမျးကို ကိုယျတိုငျအဆုံးမသတျပေးဘူးတခြိနျလုံးတော့ တခုပီးတခု Post တှတေငျနတေယျအံ့သွပါ့…. နောကျဆိုကိုယျဆုံးခနျးတိုငျတဲ့ အထိမကူညီပေးနိုငျရငျလဲ အစထဲက ဒီဇာတျလမျးကိုမစနဲ့ငါတို့လဲ အားနတောမဟုတျဘူးAttention လိုခငျြတာ တခုနဲ့ ဒီမိသားစုကိုအသုံးခပြီး တငျမနပေါနဲ့ဘပီကိုလုပျပေးစရာရှိတာတှေ လုပျပေးပွီး သူ့သှားရမယျ့လမျး စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့ နဲ့ သှားစခေငျြလို့ဒီလောကျအထိ သညျးခံပီးမေးနတော လူတှလေဲခကျတယျ” ဆိုပွီးရေးသားဖျောပွထားပါတယျ၊စာဖတျပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ မှာဆိုရင်တော့အ ဆိုတော်ရေမွန်က ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်း ကျန်း မာရေး အခြေအနေကြောင့်ရုတ်တရက် ကွယ်လွ န်သွားခဲ့ရပါတယ်၊အဆိုတော်ရေမွန် ရဲ့မိသားစု များနဲ့သူ့ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး များနဲ့အ တူထပ်တူဝ မ်းနည်း ရပါတယ်။ကွယ် လွန်သွားပြီဖြစ် တဲ့အဆိုတော်ရေမွန်လဲကောင်းရာ သုဂတိလားပါေ စလို့ဆုတော င်းပေးလို က်ပါတယ်။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲညီမဖြစ် သူလပြည့်ကဗျာ က အစ်ကိုဖြစ်သူအဆိုတော်ေ ရမွန်မကျွတ်လွတ်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုဒဲ့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။လပြည့်ကဗျာက”ဘပီကို သူလုပ်စေချင်တာလေးတွေ ၊ သူလိုအပ်တာလေးတွေ လုပ်ပေးချင်တာအခုတော့ မပြီးမပြတ်နဲ့ ထားခဲ့ရပြီ 😔လုပ်ပေးမယ်၊ကူညီပေးမယ်ပြောပေးမယ်ဆိုလည်း ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ကူညီပေးစေချင်မိတယ်အခုတော့ တဝက်တပြတ် ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နဲ့စာတောင်မပြန်ရှာတော့ဘူး 😅ကိုယ်တွေက ဘပီ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်မယ်လို့်သိထားပီးသား ဒါပေမယ့်…. သူပဲ မကျွတ်သေးဘူး၊ ရှိနေသေးတယ်၊လုပ်ပေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီး…မိသားစုတွေ(အထူးသဖြင့် မေကြီးပေါ့) ကိုသောကအပူတွေ ပေးပြီးမှတော့ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ကူညီစေချင်မိတယ်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး မကူညီနိုင်ဘူးဆိုလဲ အစထဲကစာတွေရေးရေးပီး တင်မနေနဲ့ပေါ့
ဒီကလူတွေက မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေကြရတာလေ သွားမေးတော့လဲ စာတောင်ဝင် မဖတ်ကြည့်ပေးမယ် ပြောပီး ကိုယ်စတ့ဇာတ်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်အဆုံးမသတ်ပေးဘူးတချိန်လုံးတော့ တခုပီးတခု Post တွေတင်နေတယ်အံ့သြပါ့…. နောက်ဆိုကိုယ်ဆုံးခန်းတိုင်တဲ့ အထိမကူညီပေးနိုင်ရင်လဲ အစထဲက ဒီဇာတ်လမ်းကိုမစနဲ့ငါတို့လဲ အားနေတာမဟုတ်ဘူးAttention လိုချင်တာ တခုနဲ့ ဒီမိသားစုကိုအသုံးချပီး တင်မနေပါနဲ့ဘပီကိုလုပ်ပေးစရာရှိတာတွေ လုပ်ပေးပြီး သူ့သွားရမယ့်လမ်း စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် နဲ့ သွားစေချင်လို့ဒီလောက်အထိ သည်းခံပီးမေးနေတာ လူတွေလဲခက်တယ်” ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။